डीएनए टेस्ट नगरी अन्य कागजपत्र मात्र पेश गरेमा मेरो छोरीका लागि पेश गरेको आई–१३० पेटिसन एप्रुभ हुन सक्छ ? - Vishwa News
डीएनए टेस्ट नगरी अन्य कागजपत्र मात्र पेश गरेमा मेरो छोरीका लागि पेश गरेको आई–१३० पेटिसन एप्रुभ हुन सक्छ ?
रमेश श्रेष्ठ कानुन ब्यबसायी ,न्युयोर्क
टेस्ट नगरी अन्य कागजपत्र मात्र पेश गरेमा मेरो छोरीका लागि पेश गरेको आई–१३० पेटिसन एप्रुभ हुन सक्छ ? डीएनएको टेस्ट गर्न खर्चिलो र धेरै समय लाग्ने भएकाले ज्यादै चिन्तित छु । सल्लाह दिनुभए आभारी हुने थिएँ । धन्यवाद ।
– ओम, अमेरिका
युएससीआईएसले शुरुमा पेश गरेको कागजपत्र प्रमाणका आधारमा निवेदनउपर निर्णय गर्न सकेन भने थप प्रमाणको माग गर्ने नियम रहेको छ । त्यस्ता प्रमाणहरु तोकिएको म्यादभित्र युएससीआईएसमा पेश गर्नुपर्ने नियम छ । यदि रिक्वेष्ट फर एभिडेन्स (आरएफई)ले माग गरेको प्रमाणहरु एकमुष्ट तोकिएको म्यादभित्र पेश गर्न नसकेमा उक्त निवेदन युएससीआईएसले डिनाइ गर्न सक्नेछ । त्यसैले युएससीआईएसले उठाएको प्रश्नलाई पूर्णरुपमा जबाफ दिने खालका सम्पूर्ण प्रमाणका कागजपत्रहरु एकैचोटिमा पशे गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंको केसमा बस्तुस्थिति हेर्दा बच्चाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जन्मेको समयमा नभई धेरै पछि मात्र प्राप्त गरेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा युएससीआईएसले साधारण स्थितिमा अन्य डकुमेन्टहरुको माग गर्ने हुन्छ । यदि अन्य प्रमाणहरु नभए अल्टरनेटिभ्ली डीएनए टेस्टको रिपोर्ट पनि माग गर्न सक्छ । डीएनए टेस्ट जहिले पनि अप्सनल अर्थात् ऐच्छिक हो । यदि डीएनए टेस्ट गर्न समय र खर्चको हिसाबले धेरै झन्झटिलो भएको खण्डमा अन्य सेकेन्डरी एभिडेन्स पनि पेश गर्न सकिनेछ । जस्तै– हस्पिटल रिकर्डस्, स्कुल रिकर्ड्स, चर्च वा टेम्पल रिकर्डस, मनी ट्रान्सफर गरेको रिकर्डस्, घरमा जन्मिएको भए मिडवाइफको एफिडेभिटस, घटीमा २ जना आफ्नो उमेर वा जेठो नजिकका साथीहरु वा नातेदारहरुको स्वर्न एफिडेभिट्सहरु र बच्चासँग विभिन्न सामाजिक, धार्मिक र व्यक्तिगत अवसरमा खिचिएका तस्वीर वा फोटोग्राफहरु र अन्य कुनै प्रमाणहरु जसले बाबुछोरीको सम्बन्ध स्थापित गर्दछ, त्यस्ता कागजपत्र वा प्रमाणहरु पेश गर्नुभएमा युएसीआईएसले आई–१३० पेटिसन एप्रुभ गर्न सक्नेछ । तर, यी प्रमाणहरुका साथै डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पनि पेश गर्नुभएमा तपाईंको केस अति नै स्ट्रङ्ग हुनेछ । तर, यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि अन्य प्रमाणहरुको अभावमा डीएनए टेस्ट मात्र पेश गरेर आई–१३० पेटिसन स्वीकृत हुने ग्यारेन्टी हुँदैन ।
फाइनलमा चुक्दा महिला फूटबलको ऐतिहासिक उपाधी गुम्यो